Nwere ike ibudata Vivaldi maka gam akporo | Gam akporosis
Enwere ndụ karịrị Chrome, ihe nchọgharị a na-ejikarị n'ụwa, n'ihi na eziokwu ahụ na-abịa reinstalled na ọtụtụ smartphones na nkwụsi ike na-aga n'ihu nke igwe nyocha anyị na-etinye ya, mgbe anyị na-eji ihe ọ bụla na kọmputa anyị.
Agbanyeghị, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Chrome na-enye anyị ọtụtụ ọrụ, Nzuzo onye ọrụ bụ ihe karịrị otu kwesịrị ịmalite ichegbu onwe gị. Firefox sitere na Mozilla Foundation bụ nhọrọ dị mma ịtụle. Vivaldi bụ ihe ọzọ, ọkachasị ugbu a ọ dịlarị na Storelọ Ahịa Play, ọ bụ ezie na n'oge ahụ naanị na beta.
Vivaldi, dika ihe nchọgharị niile dị n'ahịa, dabere na Chromium. Ugbu a nwere nsụgharị maka Windows na Mac na Linux ọ na-enye anyị sistemụ mmekọrịta iji nwee ike inwe otu ọdịnaya na ngwaọrụ niile metụtara otu akaụntụ ahụ.
Mgbe na beta phase, ọ ka na-efu ụfọdụ atụmatụ anyị nwere ike ịhapụ Ọ bụrụ na anyị na-ejikarị nsụgharị desktọọpụ, ebe enwere ike ịchọta taabụ adịghị, ọrụ na ka ị na-eji ya, ị gaghị enwe ike ịdị ndụ na-enweghị ntụgharị ọ na-enye.
Vivaldi na-enye anyị ohere ịhọrọ nke bụ ihe nchọgharị ndabere anyị chọrọ iji, ma Bing, Yahoo, Google, Wikipedia, DuckDuckGoNa mgbakwunye na ikwe ka anyị jikwaa ọchụchọ akụkọ ihe mere na ihe nchọgharị ndị ọzọ ga-amasị.
Maka ndị na-anụtụbeghị banyere Vivaldi, ị kwesịrị ịma na ihe nchọgharị a Amụrụ site n'aka nke onye isi CEO mbụ nke Opera, ozugbo ọ ghọrọ akụkụ nke njikọta nke ụlọ ọrụ ndị China.
A mụrụ Vivaldi n'echiche nke ike megharịa ihe nchọgharị ka Opera nọ na mbido ya, pụọ na nnukwu ụlọ ọrụ na iji ọnụ ọgụgụ buru ibu arụ ọrụ, ọrụ ndị nwere ike ịba uru mgbe ụfọdụ ma zọpụta anyị na ọsọ ọsọ.
Developer: Vivaldi Teknụzụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nwere ike ibudata Vivaldi maka gam akporo
Ihe oyiyi a na - esepụtakwu nke Pixel 4, kpọmkwem nke ụdị "Coral"
Ọtụtụ narị ngwa adịlarịrị dakọtara na usoro ọhụụ ọhụụ nke Galaxy Fold